ဩဂုတ် ၂၁၊ ၂၀၁၇ နေကြတ်ခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ဩဂုတ် ၂၁၊ ၂၀၁၇ (တနင်္လာနေ့) တွင် "Great American Eclipse" ဟု ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည့် အပြည့်အဝ နေကြတ်ခြင်း ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ တဆက်တည်းဖြစ်သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးမှ တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဖြစ်စဉ်သည် ပစိဖိတ်မှ အတ္တလန္တိတ်ကမ်းရိုးတန်းအထိ ဖြတ်သန်းသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အခြားနိုင်ငံများတွင်မူ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နေကြတ်ခြင်းကိုသာ တွေ့မြင်ခဲ့ကြရသည်။
မက်ရက်စ်မြို့၊ အိုရီဂွန်ပြည်နယ်မှ တွေ့မြင်ရစဉ်
160 စက္ကန့် (2 မိနစ် 40 စက္ကန့်)
37°00′N 87°42′W﻿ / ﻿37°N 87.7°W﻿ / 37; -87.7
၁၁၅ km (၇၁ mi)
(U4) အပြည့်အဝ ပြီးဆုံး
(P4) တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြီးဆုံး
145 (22 of 77)
အပြည့်အဝနေကြတ်စဉ်ကာလအတွင်း ဂရင်းဗေးမြို့၊ တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်၏ အမြန်ပြကွက်ဗီဒီယို
လသည် ကမ္ဘာနှင့် နေအကြား ဖြတ်သန်းရောက်ရှိချိန်တွင် နေကြတ်ခြင်းဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားပြီး ကမ္ဘာမြေမှ ကြည့်ရှုသူအနေဖြင့် လသည် နေလုံး၏ ပုံရိပ်အား တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သို့မဟုတ် အပြည့်အဝ ကာကွယ်သွားသည့် ပုံစံဖြင့် မြင်တွေ့ရသည်။ လ၏ ထင်မြင်ရသော အချင်းသည် နေထက် ကြီးမားသွားသည့်အခါတွင် အပြည့်အဝ နေကြတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပြီး တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်အားလုံးကို ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီး နေ့အချိန်တွင် အမှောင်ကျခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အပြည့်အဝကြတ်ခြင်းသည် ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကျဉ်းမြောင်းသော လမ်းကြောင်းအနေဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နေကြတ်ခြင်းကို ကီလိုမီတာထောင်ပေါင်းများစွာ ကျယ်သော ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသတစ်ဝိုက်တွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဤကဲ့သို့ တဆက်တည်းဖြစ်သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးမှ တွေ့မြင်ရသည့် အပြည့်အဝ နေကြတ်ခြင်း ဖြစ်စဉ်သည် ဇွန် ၈၊ ၁၉၁၈ တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး; ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၇၉ နေကြတ်ခြင်းသည် အပြည့်အဝကြတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တစ်နိုင်ငံလုံးမှ မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ အပြည့်အဝ နေကြတ်ခြင်း လမ်းကြောင်းသည် ပြည်နယ် ၁၄ ခုတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နေကြတ်ခြင်းကိုမူ ပြည်နယ် ၅၀ အားလုံးမှ တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည်။ အပြည့်အဝ နေကြတ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်သည့် ဧရိယာအများစုသည် သမုဒ္ဒရာဒေသဖြစ်သော်လည်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဧရိယာ၏ ၁၆ % ခန့်သာ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ်၏ အရိပ်ကျခြင်းသည် အိုရီဂွန်ပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်းတွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြတ်ခြင်းအနေဖြင့် 4:06 p.m UTC (9:06 a.m. PDT) အချိန်တွင် ကုန်းမြေတွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ကမ်းရိုးတန်း၌ 6:44 p.m. UTC (2:44 p.m. EDT) အချိန်တွင် ကုန်းမြေပေါ်တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နေကြတ်ခြင်း ဖြစ်စဉ်အနေဖြင့် အရိပ်ကျခြင်း ဖြစ်စဉ် ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ ဟာဝိုင်ယီပြည်နယ်၊ ဟိုနိုလူလူမြို့တွင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နေကြတ်ခြင်းကို နေထွက်ချိန် 4:20 p.m. UTC (6:20 a.m. HST) တွင် စတင်တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး 5:25 p.m. UTC (7:25 a.m. HST) အချိန်တွင် ပြီးဆုံးသည်။
ဤကဲ့သို့ နေအပြည့်အဝကြတ်ခြင်း ဖြစ်စဉ်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဧပြီ ၂၀၂၄ (ပြည်နယ် ၁၂ ခု) နှင့် ဩဂုတ် ၂၀၄၅ (ပြည်နယ် ၁၀ ခု)၊ နှင့် အကွင်းပုံ နေကြတ်ခြင်းများ (လသည် နေလုံးထက် သေးငယ်သည်ဟု ထင်ရချိန်) သည် အောက်တိုဘာ ၂၀၂၃ (ပြည်နယ် ၉ ခု) နှင့် ဇွန် ၂၀၄၈ (ပြည်နယ် ၉ ခု) တို့တွင် ဖြစ်ပေါ်မည် ဖြစ်သည်။
ဩဂုတ် ၂၀၁၇ နေကြတ်ခြင်းဖြစ်စဉ် (အနက်ရောင်အစက်သည် အပြည့်အဝနေကြတ်ခြင်း ဖြစ်သည်)
ဖိုင်:Great American Eclipse August 21, 2017.gif
ဩဂုတ် ၂၁၊ ၂၀၁၇ အပြည့်အဝ နေကြတ်ခြင်း ဖြစ်စဉ်
အပြည့်အဝ နေကြတ်ခြင်းသည် ပမာဏ ၁.၀၃၀၆ မဂ္ဂနီကျူ့ရှိပြီး လမ်းကြောင်းကျဉ်းကာ ၇၀ မိုင် (၁၁၀ ကီလိုမီတာ) ရှိပြီး တဆက်တည်းဖြစ်သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ပြည်နယ် ၁၄ ခု (အိုရီဂွန်ပြည်နယ်၊ အိုင်ဒါဟိုပြည်နယ်၊ ဝိုင်အိုးမင်းပြည်နယ်၊ မွန်တားနားပြည်နယ်၊ အိုင်အိုဝါပြည်နယ်၊ ကန်းဆပ်ပြည်နယ်၊ နီဘရားစကားပြည်နယ်၊ မစ်ဆိုရီပြည်နယ်၊ အီလီနွိုင်းပြည်နယ်၊ ကင်တပ်ကီပြည်နယ်၊ တင်နက်ဆီပြည်နယ်၊ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်၊ မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ် နှင့် တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်) တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ကုန်းမြေမှ စတင်မြင်တွေ့ရမှုသည် အိုရီဂွန်ပြည်နယ်၏ ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသ၌ 10:15 a.m. PDT (17:15 UTC) တွင် စတင်ခဲ့ပြီး တဖြည်းဖြည်း အရှေ့ဘက်သို့ ရွေ့လျားကာ ဆာလမ်မြို့ (အိုရီဂွန်ပြည်နယ်)၊ အိုင်ဒါဟိုဖောမြို့ (အိုင်ဒါဟိုပြည်နယ်)၊ ကပ်စပါမြို့ (ဝိုင်အိုးမင်းပြည်နယ်)၊ လင်ကွန်းမြို့ (နီဘရားစကားပြည်နယ်)၊ ကန်းဆပ်စီးတီးမြို့ (မစ်ဆိုရီပြည်နယ်)၊ စိန့်လူးရစ်မြို့ (မစ်ဆိုရီပြည်နယ်)၊ ဟော့ပ်ကင်းဗေးမြို့ (ကင်တပ်ကီပြည်နယ်)၊ နစ်ဗေးမြို့ (တင်နက်ဆီပြည်နယ်)၊ ကိုလံဘီယာမြို့ (တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်) တို့တွင် 2:41 p.m. အချိန်ခန့်နှင့် ချာစတန်မြို့ (တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်) တို့တွင် အသီးသီး မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြတ်ခြင်းကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး 9:00 a.m. PDT အချိန်မှ စတင်ကာ အိုရီဂွန် ပစိဖိတ် ကမ်းရိုးတန်းမှ စတင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အနောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း အချို့ပြည်နယ်များတွင် တိမ်ကင်းစင်နေမည်ဟု ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ပေးခဲ့သော်လည်း အနောက်အလယ်နှင့် အရှေ့ကမ်းရိုးတန်းတို့တွင် တိမ်ရှိနေခဲ့သည်။
မြေပြင်တွင် အချိန်အကြာဆုံး နေအပြည့်အဝ ကြတ်ခြင်း ဖြစ်စဉ်သည် ကြာမြင့်ချိန် ၂ မိနစ်၊ ၄၁.၆ စက္ကန့်ဖြင့် အီလီနွိုက်ပြည်နယ်၊ ကာဘွန်ဒေးမြို့ တောင်ဘက် မြေပုံညွှန်း 37°35′0″N 89°7′0″W﻿ / ﻿37.58333°N 89.11667°W﻿ / 37.58333; -89.11667 ရှိ ဂျိုင်းရင့်စီးတီးစတိတ်ဥယျာဉ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ အကျယ်ပြန့်ဆုံး ဖြစ်စဉ်မှာ ဟော့ပ်ကင်းဗေးမြို့နှင့် ပရင်စတန်မြို့အကြား မြေပုံညွှန်း 36°58′0″N 87°40′18″W﻿ / ﻿36.96667°N 87.67167°W﻿ / 36.96667; -87.67167 ရှိ စာရူလီယန်ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည် မတ် ၇၊ ၁၉၇၀ နေကြတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ပြီးနောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရှေ့တောင်ပိုင်းမှ တွေ့မြင်ရသော ပထမဆုံး အပြည့်အဝနေကြတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နေကြတ်ခြင်းကို မြောက်အမေရိက၊ တောင်အမေရိကတိုက်မြောက်ပိုင်း၊ အနောက်ဥရောပရှိ နေရာအားလုံးနှင့်၊ အာဖရိကတိုက် နေရာအချို့၊ အာရှအရှေ့မြောက်ရှိ နေရာအချို့တို့မှ တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။
Umbra (black oval), penumbra (concentric shaded ovals), and path of totality (red).
ဤဗီဒီယိုတွင် ဖြစ်စဉ်၏ အမြင်အများအပြား ပါဝင်သည်။
ဆီအက်တယ်မှ မြင်တွေ့ရသော ၂၀၁၇ နေကြတ်ခြင်း
၂၀၁၇ နေကြတ်ခြင်းကို ဝါရှင်တန်ရှိ မြောက်ကက်စကိတ် အမျိုးသားဥယျာဉ်မှ တွေ့မြင်ရပုံ
နိုင်ငံတကာ အာကာသ စခန်းမှ မြင်တွေ့ရသော နေကြတ်ခြင်းအရိပ်
ဩဂုတ် ၂၀၁၇ နေကြတ်စဉ်အတွင်း ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်၊ မွန်းမြို့၌ သစ်ရွက်တို့မှ လခြမ်းပုံအရိပ်များ ထိုးထွက်နေစဉ်
ပစိဖိတ် PDT အချိန် နံနက် ၉:၀၆ အချိန်တွင် စတင်ကာ နံနက် ၁၀:၁၉ တွင် အပြည့်အဝကြတ်ပြီး နံနက် ၁၀:၂၁ အချိန်တွင် ပြီးဆုံးသည့် နေကြတ်ခြင်း ဖြစ်စဉ်။
အိုရီဂွန်ပြည်နယ်၊ ကော်ဗေးလစ်မြို့မှ မြင်တွေ့ရသည့် နေကြတ်ခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်သော စိန်လက်စွပ်သဏ္ဌာန်
စပိန်နိုင်ငံ Zarautz, Basque Country မှ တွေ့မြင်ရသော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နေကြတ်ပုံ
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှ နေဝင်ချိန်တွင် တွေ့မြင်ရသော တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း နေကြတ်ပုံ
၂၀၁၇ အပြည့်အဝ နေကြတ်ခြင်းအား ကိုလမ်ဘီယာမှ မြင်ရပုံ
↑ Fraknoi, A. (2015). "The Great American Eclipse of 2017: An Outreach Opportunity and Challenge". [Astronomical Society of the Pacific Conference Series 500, Celebrating Science: Putting Education Best Practices to Work. Archived 17 December 2019 at the Wayback Machine.
↑ Tracing The Path Of The Solar Eclipse Across The U.S. On August 21, 2017 | Solar Eclipse 2017 at YouTube published on August 2, 2017 TIME
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Chan, Melissa. "The 2017 Total Solar Eclipse: Everything You Need to Know", Time (July 25, 2017).
↑ Wolfram၊ Stephen (August 15, 2017)။ When Exactly Will the Eclipse Happen? A Multimillenium Tale of Computation။
↑ "How to view the partial solar eclipse in Hawaii"၊ KHON2 Nexstar Media Group၊ August 15, 2017။ 22 August 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 22 August 2017။
↑ "Eclipse: Who? What? Where? When? and How?", NASA.
↑ Voyages of Discovery: 2017 Total Solar Eclipse။
↑ Malik၊ Tariq (August 18, 2017)။ Here'saTimeline of When the 2017 Solar Eclipse Begins and Ends။ space.com။ August 21, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Solar Eclipse: What to Expect။ The New York Times (August 21, 2017)။ August 21, 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 2017 August 21 Total Solar Eclipse။ USNO။ 2014 October 12 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ April 25, 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဩဂုတ် ၂၁၊ ၂၀၁၇ နေကြတ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်သမျှကို
မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ / အထင်မှားများ / အချက်အလက်များ
Eclipse FAQ – နာဆာ
Eclipse misconceptions – နာဆာ
တည်နေရာအခြေပြု နေကြတ်လကြတ်မှု တွက်ချက်ခြင်းများ Archived 20 August 2017 at the Wayback Machine.
Determine eclipse viewing details for any city in U.S. Archived 12 October 2014 at the Wayback Machine. – U.S. Navy
An Observer's Guide to Viewing the Eclipse – National Science Teachers Association
Interactive map Archived 21 August 2017 at the Wayback Machine. – ဂူဂယ်
Color map – နာဆာ
နေရောင်ခြည်စစ်များ / မျက်မှန်များ / viewers
Reputable vendors of solar filters & viewers – အမေရိကန် နတ္ခတ္တဗေဒ အသင်း
How to determine if your paper glasses are safe? Archived 21 August 2017 at the Wayback Machine. – နာဆာ
How to view the 2017 solar eclipse safely – နာဆာ
2D/3D printable pinhole projectors – နာဆာ
Eclipse Site – နာဆာ
Eclipse resource guide – Astronomical Society of the Pacific
Map, animations, and state-by-state guide to the eclipse of 2017
2017 eclipse site with eclipse overview, maps, cities, events, animations, safety, gear, history, and calendar.
Solar power impact, diagram from EIA
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဩဂုတ်_၂၁၊_၂၀၁၇_နေကြတ်ခြင်း&oldid=719427" မှ ရယူရန်
၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၂၀:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။